Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yomndeni | Nginike isikhathi sokuphumula
Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yomndeni
Isaka | 17/12/2021 17:47 | Kubuyekezwe ku- 21/12/2021 09:02 | General
Zimbalwa izinto ezingcono kunokuchitha isikhathi nabantu obathandayo, nomlingani wakho, umndeni wakho, noma izingane zakho. Ukuchitha izinsuku, ntambama nobusuku udlala ekhaya futhi ushiya ezinye zezikhathi ezikhumbulekayo eziyohlale zikhunjulwa. Futhi ukuze lokhu kwenzeke, uzodinga ezinye zazo imidlalo yebhodi engcono kakhulu yomndeni. Lokho kusho, imidlalo yebhodi ethandwa yiwo wonke umuntu, izingane, intsha, abantu abadala nabadala.
Kodwa-ke, uma kubhekwa inani lemidlalo etholakalayo nokuthi kunzima kangakanani ukwenza wonke umuntu ajabule, akuwona umsebenzi olula ukuwukhetha. Lapha sikusiza ukuthi ukwenze, ngezinye izincomo ezihamba phambili, nge ethengisa kakhulu futhi kumnandi yini ongayithola...
1 Imidlalo yebhodi engcono kakhulu ongayidlala nomndeni
1.1 I-Diset Party & Co Family
1.2 Ukuphishekela Umndeni Okuncane
1.3 I-Mattel Pictionary
1.4 Ukuqhakaza komndeni
1.6 Uthando olunamagama I-Families Edition
1.7 Bizak Izingane ngokumelene nabazali
1.8 Izinganekwane Ezigcwele
1.9 Bhebha! Umdlalo we-Wild West
1.10 Gloom Inopportune Izivakashi
2 Imidlalo yebhodi ejabulisayo ezodlalwa njengomndeni
2.1 I-Game Off Ibutho lama-head-to-head duels
2.3 Amakhyubhu ezindaba
2.5 Uga Bhuga
3 Ungakhetha kanjani umdlalo webhodi lomndeni omuhle?
Imidlalo yebhodi engcono kakhulu ongayidlala nomndeni
Kukhona imidlalo yebhodi edlalwa njengomndeni ephakathi kwevelele kakhulu. Imisebenzi yeqiniso yobuciko bezokungcebeleka nokuzijabulisa ukuchitha izikhathi ezihamba phambili nabathandekayo bakho futhi ezivame ukuba nebanga elibanzi leminyaka, ngaphezu kokwamukela amaqembu amakhulu abadlali. Abanye izincomo Yilezi:
I-Diset Party & Co Family
I-Diset - Iphathi & Co Family ...
Iphathi yakudala, kodwa kuhlelo olukhethekile lomndeni. Ifanele kusukela eminyakeni engu-8 ubudala. Kuyo kufanele wenze izivivinyo eziningi uma kuyithuba lakho, futhi ingadlalwa ngamaqembu. Lingisa, dweba, lilingise, phendula imibuzo, futhi uphumelele imibuzo ejabulisayo. Indlela yokuthuthukisa ukuxhumana, ukubona ngeso, ukudlala kweqembu, nokunqoba amahloni.
Thenga Iphathi & Co.
Ukuphishekela Umndeni Okuncane
Umdlalo omncane webhodi ...
Umdlalo ofanele bonke ubudala kusukela eminyakeni engu-8 ubudala. Umdlalo wakudala wemibuzo nezimpendulo, kodwa kuhlelo lomndeni, njengoba uhlanganisa amakhadi ezingane namakhadi abantu abadala, anemibuzo engama-2400 yesiko elijwayelekile ukuhlola ulwazi lwakho. Ukwengeza, inselele ye-Showdown ifakiwe.
Imidlalo ye-Mattel -...
Bangadlala bonke kusukela eminyakeni engu-8 ubudala, benekhono lokudlala ukusuka ku-2 kuya ku-4 abadlali noma benze amaqembu. Ingenye yemidlalo yebhodi ehamba phambili yemindeni, inhloso yayo kuwukuqagela igama noma ibinzana ngokusebenzisa izithombe. Kufaka phakathi ibhodi elimhlophe, omaka, amakhadi ezinkomba, ibhodi, iwashi lesikhathi, amadayisi, namakhadi angama-720.
FAMILY BOOM - Umdlalo we ...
Umndeni wonke ungabamba iqhaza kulo mdlalo wakudala. Amakhadi angu-300 ahlukahlukene najabulisayo, ibhodi, kulula ukudlala, anezinselelo, izenzo, izimfumbe, ukutotoswa, izijeziso zokukhohlisa, njll. Indlela enhle yokuqoqa bonke obathandayo futhi ube nesikhathi esihle.
Thenga i-Family Boom
I-Repos Production-Concept ...
Umndeni wonke ungadlala, unconywe kusukela eminyakeni eyi-10 ubudala. Kungumdlalo ojabulisayo noshintshayo lapho uthuthukisa khona ubuhlakani bakho nomcabango wakho wokuxazulula izindida. Umdlali kufanele ahlanganise izithonjana zomhlaba wonke noma izimpawu ukuze azame ukwenza abanye baqagele ukuthi imayelana nani (izinhlamvu, izihloko, izinto, ...).
Uthando olunamagama I-Families Edition
UTHANDO NGAMAZWI -...
Umdlalo wabancane nabadala, ozodlalwa njengomndeni futhi usize ekuqiniseni izibopho phakathi kwabahlanganyeli. Idizayinelwe ukukhanga abazukulu, ogogo nomkhulu, abazali nezingane, ibasize babe nesikhathi esihle ngamakhadi ayi-120 anemibuzo ejabulisayo nezinketho eziholela ezihlokweni zezingxoxo ezahlukahlukene.
Thenga uthando ngamazwi
Bizak Izingane ngokumelene nabazali
I-Bizak Game Sons Against ...
Omunye wemidlalo yebhodi ehamba phambili yomndeni, enemibuzo nezinselelo zawo wonke amalungu. Ophumelele kuzoba nguye owela ibhodi kuqala, kodwa ngalokho kufanele uthole imibuzo ngendlela efanele. Idlalwa ngamaqembu, izingane ziphikisana nabazali, nakuba amaqembu axubile nawo angenziwa.
Ukuthenga izingane ngokumelene nabazali
I-Edge Entertainment -...
Kulo mdlalo webhodi lomndeni, umdlali ngamunye uthatha indima yesilwane esigxishiwe okufanele sisindise intombazane esiyithandayo, njengoba ithunjwe into embi futhi engaqondakali. Incwadi yezindaba efakiwe izosebenza njengomhlahlandlela endabeni kanye nezinyathelo okufanele zilandelwe ebhodini ...
Thenga Izinganekwane Ezigcwele
Bhebha! Umdlalo we-Wild West
Igeyimu yekhadi ekubuyisela emuva ezikhathini zase-Wild West, emgwaqweni owubhuqu ne-duel yokufa. Kuyo, izigebengu zizobhekana nosherifu, isherifu ngokumelene nabephula umthetho, futhi umhlubuki uzokhipha icebo eliyimfihlo lokujoyina noma yibaphi ama-bamdos ...
Gloom Inopportune Izivakashi
Umdlalo lapho kuzoba nezivakashi ezisabekayo, umndeni wezigelekeqe, nesithabathaba somuzi. Yini engase yonakale? Lona umdlalo wamakhadi we-Gloom, oza njengokunwetshwa kwegeyimu eyisisekelo.
Ukuthenga Izivakashi Ezingafanele
Imidlalo yebhodi ejabulisayo ezodlalwa njengomndeni
Kodwa uma okufunayo kuwukuqhubekela phambili futhi uthole imidlalo yebhodi ehlekisayo ukuze ungayeki ukuhleka, ukukhala ngokuhleka, nokwenza isisu sakho sibe buhlungu, nansi eminye. izihloko ezizokwenza ube nesikhathi esingcono kakhulu:
I-Game Off Ibutho lama-head-to-head duels
I-Game Off - Ibutho ...
Umdlalo webhodi lomndeni ofanele yonke iminyaka, odalelwe abantu abaqhudelanayo nababucayi. Inama-duels angu-120 ayingqayizivele ongayenza ubuso nobuso nezihlobo zakho. Kuzo kumele ukhombise ikhono lakho, inhlanhla, isibindi, amandla engqondo noma ngokomzimba. Kwenziwa ama-duels ashesha kakhulu futhi ajabulisayo, kuyilapho bonke abanye abadlali benza njengejaji ukuze banqume owinile. Uyalokotha?
Thenga Igeyimu Ivaliwe
Glop Mimika - Umdlalo we ...
Omunye wemidlalo eyintandokazi yemindeni ongahlola ngayo isineke sakho, ukuxhumana kanye nekhono lokudlulisa ngokulingisa. Ilungele izingane, intsha kanye nabantu abadala. Wonke umuntu uzokujabulela ukudlala nokuxhumana. Kuhlanganisa amakhadi angu-250 ezigaba ezahlukene futhi kuzodingeka wenze abanye baqagele ukuthi yini ofuna ukuyiveza ngokuthinta komzimba.
I-Asmodee- Story Cubes ...
Lo mdlalo owalabo abathanda umcabango, ukusungulwa kanye nokuxoxa izindaba ezimnandi. Inamadayisi angu-9 (isimo somqondo, uphawu, into, indawo, ...) ongakwazi ukugoqa ngezinhlanganisela ezingaphezu kwesigidi esi-1 ezindabeni okuzodingeka uzidale kuye ngokuthi uqhamuke ini. Ifanele ubudala obungu-6 nangaphezulu.
I-Hasbro Gaming- Twister ...
Omunye wemidlalo engcono kakhulu yokuzijabulisa komndeni. Inombhede onemibala lapho kuzofanela usekele ingxenye yomzimba ekhonjiswe ebhokisini le-roulette lapho ofike khona. Ukuma kuzoba inselele, kodwa nakanjani kuzokwenza uhleke.
Imidlalo ye-Cocktail- Ugha ...
Umdlalo wekhadi womndeni wonke, ofanele iminyaka engu-7+. Kuyo ungena ezicathulweni zesizwe sangaphambi komlando wama-cavemen, futhi umdlali ngamunye kuzodingeka aphinde uchungechunge lwemisindo nokukhononda ngokusho kwamakhadi aphumayo futhi ngenhloso yokuba umholi omusha weqembu. Into ekhohlisayo ngalo mdlalo ukuthi kuzodingeka ubambe ngekhanda imisindo noma izenzo zamakhadi azoqoqwa kancane kancane futhi kufanele uwadlale ngendlela efanele ...
Thenga i-Ugha Bugha
Devir - Ubongo, umdlalo we ...
I-Ubongo ingenye yemidlalo ejabulisa kakhulu yomndeni wonke, enconyelwe abantu abangaphezu kweminyaka engu-8 ubudala. Abadali bayo bayaqinisekisa ukuthi iyanyakaza ngenxa yokuthi abadlali bazozama kanjani ukufaka izingcezu eqenjini labo ngesikhathi esisodwa; kuyalutha ngoba uma uqala ngeke ukwazi ukuyeka; futhi kulula ngokwemithetho yayo.
Ungakhetha kanjani umdlalo webhodi lomndeni omuhle?
Ukuze ukhethe kahle imidlalo yebhodi lomndeni engcono kakhulu, eminye imininingwane ebalulekile kufanele inakwe:
Kufanele babe nejika lokufunda elilula. Kubalulekile ukuthi izinsimbi zomdlalo ziqondwe kalula kwabancane nabadala.
Kufanele zibe ezingaphelelwa isikhathi ngangokunokwenzeka, ngoba uma zihlobene nesikhathi esidlule noma kwezinye izinto zanamuhla, abancane nasebekhulile bayolahleka ngandlela-thile.
Futhi, kunjalo, kufanele kujabulise kuwo wonke umuntu, kunetimu ejwayelekile futhi engahloselwe izethameli ezithile. Ngamafuphi, yiba nebanga elibanzi leminyaka enconywayo.
Okuqukethwe kufanele kube okwazo zonke izethameli, okungukuthi, akumele kukhawulelwe kubantu abadala kuphela.
Njengoba ingeyomndeni wonke, kufanele kube imidlalo ongabamba iqhaza kuyo ngamaqembu noma evuma inqwaba yabadlali ukuze kungabikho osala ngaphandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yomndeni
Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yabantu abadala
Hlangana ne-scooter endizayo kusuka ku-Back to the future